Munamato kuVirgen del Carmen. ? Pamatambudziko akaoma uye Kudzivirirwa
Munamato kuMhandara kubva kuna Carmen, hapana mamiriro akaoma asingagoni kugadziriswa nemutsara uye mune iyi nyaya iyo munamato kumhandara yaCarmen Iyi ndiyo nzira yekuzvipira iyo nguva zhinji yatinofanirwa kutarisana nayo zuva nezuva, nekuti hatizive kuti inguvai yatinofanira kurarama chimwe chinhu chakaoma uye zvakanaka kudzivirirwa.
Munamato ndicho chombo chine simba icho chatinogona kushandisa chero nguva yatinenge tichida kana kuida.
Mhandara iyi inoonekwa sekudiwa uye izvi imhaka yekuti zvishamiso uye mhinduro dzinogona kutanga kuoneka mumaminitsi mashoma mushure mekunamata, iyi ndiyo nyaya mune dzakawanda.
Kuziva kuti isu tine munhu kudenga anotinzwisisa uye anogona kutitsigira nekuda kwemamiriro ese ezvinhu anotizadza nerunyararo uye kuvimba kuti zvese zvichave zvakanaka.
1 Munamato kuna Virgen del Carmen Ndiani Virgen del Carmen?
1.1 Namata kuna Virgen del Carmen yematare akaoma
1.2 Munamato weVirgen del Carmen wekujekesa uye kuchengetedzwa
1.3 Munamato wekuonga uye kupa
1.4 Virgen del Carmen munamato kuti usvike kwaari rudo
Munamato kuna Virgen del Carmen Ndiani Virgen del Carmen?
Kuzivikanwa se Mukadzi wedu weCarmen, ndomumwe wekurudziro yakapihwa kuMhandara Maria. Iro zita rinobva kuGomo reKarimeri muIsrael iro rinoreva kuti ndiGadheni.
Mune dzimwe nyika anoonekwa sevatsigiri vevatsvene vegungwa uye mune vamwe, sekuSpain, anoonekwa semusande anodzivirira weSpanish Armada. Zvinonzi mugore ra1251 iyi mhandara yakazviratidza kunaSimon Simon Stock aive mukuru mukuru weOrder.
Mukusangana ikoko murume akapihwa scapular nemaitiro ake, izvo zviratidzo zviviri zveya inozivikanwa seMarian cult yevaCarmelites kupota nyika.
Kuzvipira kuMhandara Maria itsika yechechi yeKatorike iyo inoratidza kukosha kwemhandara pakuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu sechimiro chemurume pano pasi.
Chokushandisa chaMwari Baba kuzadzisa zvinangwa zvehumwari nanhasi.
Namata kuna Virgen del Carmen yematare akaoma
Ndine matambudziko ane chiuru: ndibatsireiwo.
Kubva kuvavengi veomweya: Ndiponesei.
Mukukanganisa kwangu: Ndivhenekerei.
Mukusahadzika kwangu uye neshungu: ndiudze.
Mune urwere hwangu: ndisimbisei.
Kana vachindizvidza: ndifadze.
Mumumaawa akaoma: ndinyaradze.
Nemoyo wako wamai: ndide.
Nesimba renyu guru: Ndichengetedzei.
Uye mumaoko ako pazvinopera: ndigamuchire.
Mhandara yeCarmen, tinamatire isu.
Saamai, Mhandara Maria inoziva kushungurudzika kune wemudiwa ari munjodzi.
Iye anokwanisa uye ane masimba ekutsigira zvatinoda pamberi peMusiki Mwari wezvinhu zvese.
Minamato yakaitwa nekutenda kubva kumweya inoshanda, hatigone kubvunza kana isu tisingatendi kuti chishamiso chatakamirira chinogona kupihwa kwatiri, nyangwe zvikaita shuwa sei kuti izvi zvinogoneka, rangarira kuti kana isu tainamata nekuti Tiri kukumbira chimwe chinhu chinogona kungowanikwa nenzira yakasikwa.
Munamato weVirgen del Carmen wekujekesa uye kuchengetedzwa
Oo Musikana Musiki weCarmen! Amai vaIshe wedu Jesu Kristu uye mudziviriri wevaya vese vanopfeka chenyu chitsvene scapular.
Nhasi ndinonamata pamberi penguvo yako ine nyasha kuti unogara uchindivhenekera Kuburikidza nenzira dzakasviba dzehupenyu huno umo ini ndinogona kutsauka pasina ruoko rwako runobatsira.
Ndiregerereiwo zvivi zvangu zvese ndinokuyemurai kwazvo Uye ndinokuremekedzai zuva nezuva. Usandirasa munguva dzekushushikana. Pasina rubatsiro rwako ndingangove gwai rakatsauka.
Kubvunza mwenje nekudzivirira isu, kune wemhuri kana kushamwari yakasarudzika hachisi chinhu chitsva.
Muchokwadi chinoonekwa seimwe yeanowanzo kukumbirwa mushure mezvishamiso zvehutano.
Zviri zvakajairwa kunzwa kusagadzikana kana kudzivirirwa munyika umo zvinoita kunge zvakaipa zviri kuuya uye ndosaka kusimudza chikumbiro chemunamato kuna Virgen del Carmen kana chero chero musande anogona kutibatsira kunoshamisa.
Munamato wekuonga uye kupa
Oo Musikana Unoyera weCarmen!
Hatife takapindura neruremekedzo kune zvakanaka uye nekutenda izvo zvawakatipa nekutipa kwako kutsvene Scapular.
Gamuchira yedu yakapusa, asi inoreva zvakadzama, ndatenda uye, sezvo pasina chatinogona kukupa chakakodzera Iwe uye netsitsi dzako.
Tinopa moyo yedu, nerudo rwayo rwese, uye nehupenyu hwedu hwese, izvo zvatinoda kushandisa murudo nebasa reMwanakomana wako, Ishe wedu, uye mukuparadzira kuzvipira kwako kwakanaka ...
Kutsvaga kuti hama dzangu dzese mukutenda, ane Divine Divine Providence anotiita kuti tirarame uye kuwirirana, kukoshesa uye nekutenda chipo chako chikuru, kupfeka Holy Scapular, uye kuti isu tese tinogona kurarama uye kufa murudo rwako uye kuzvipira.
Wakafarira Mhandara yeCamen munamato wekutenda uye kupa?
Nguva zhinji tinokanganwa minamato kana tangogamuchira izvo zvatanga tichikumbira asi izvi hazvifanire kunge zvakadaro.
Bhaibheri rinotaura nyaya dzevanhu vasina kuratidza kuvonga uye nevamwe vakaita.
Saizvozvo nezvatakapiwa, tinokanganwa zvese kana tiine zvataida.
Kunamata uchivonga chiitwa chisingaendi kunoonekwa kudenga. Patinopa uye hatizadzise, ​​zvinoratidzirawo kumatenga.
Hazvina mhosva kuti zvinotora nguva yakareba sei kuonga kana kupa zvawakavimbisa, chakakosha kuzviita.
Virgen del Carmen munamato kuti usvike kwaari rudo
O Mhandara yeCarmen, Maria Nzvimbo Tsvene!
Ndiwe chisikwa chakanakisa kupfuura zvese, yakanyanya kunaka, yakachena kwazvo, wakanaka kupfuura vese.
Ah, dai vanhu vese vaikuziva iwe, Mai vangu naAmai, kana munhu wese akakuda sezvaunoda!
Asi ndinonyaradzwa nekuti mweya yakawanda yakaropafadzwa kudenga nepanyika inogara murudo nekunaka kwako uye runako.
Uye ndinofara zvikuru nekuti Mwari unokuda iwe uri woga kupfuura vanhu vese uye vatumwa pamwe.
Mambokadzi wangu ane rudo, ini, mutadzi anosuwa, ndinokuda, asi ini ndinokuda zvishoma kana ndichienzanisa nezvaunofanirwa; Ini ndinoda, saka, rudo rukuru uye runyoro kwauri, uye izvi uchafanirwa kuti usvike kwandiri, sezvo kukuda uye kutakura yako Tsvene Scapular chiratidzo chekufanorongerwa kubwinya, uye inyasha iyo Mwari yavanongopa kuna avo zvinobudirira vanoda kuponesa.
Iwe, saka, kuti iwe unosvika kune zvese kubva kuna Mwari, nditorere iyi nyasha: moyo wangu ngavapise murudo rwako, maererano nerudo rwawakandiratidza; Kuti ndinokuda semwanakomana chaiye, sezvo uchindida nerudo runyoro rwaamai, kuti, ndichibatana newe nerudo pano pasi, handingaparadzanise newe gare gare mukusingaperi.
Munamato uyu kuna Virgen del Carmen kuti usvike parudo rwake rwakasimba.
Kuwana rudo rwechokwadi kunetseka kunogara kuripo muhupenyu hwedu, kunyanya kana zera rakati ratosvika kana kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wakura.
Nenzira imwechete iyi munamato unoshanda mune izvo zviitiko apo kuwana mumwe wako anomiririra kune imwe nhanho yekunetseka kana mune zviitiko apo zvakanyanya kuoma kuwa murudo kana kukunda mumwe munhu, minamato iyi yekuwana kana kuwana rudo rwavo.
Rangarira kuti zvombo zvemweya zvine simba uye hatigone kuzviteerera kunyange isu tisingazive kuti zvinoshanda sei, iri zano rine simba ratingashandisa panguva yatinoda nekutenda uye kuvimba kuti munamato uyu uchapindurwa zvine simba.
Zvese izvi zvakanakira, kukumbira kubatsirwa uye axulio uye kwakaipa kuita izvozvo kanopfuura kamwe.
Tora mukana wesimba rekunamatira kuMhandara yeKarmen kuti uchinje hupenyu hwako.